Milaza Ny Filohan’i Ghana Fa Tsy Maintsy Miala Amin’ny ‘Toe-tsaina Tia Miankina’ Amin’ny Fanampian’ny Tandrefana i Afrika · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 05 Febroary 2018 8:00 GMT
Vakio amin'ny teny Español, Türkçe, English
Pikantsary avy amin'ny valan-dresaka ho an'ny mpanao gazety nataon'ny filoha Frantsay Emmanuel Macron sy ny Filohan'i Ghana Nana Akuffo-Addo. Amin'ny alàlan'ny Scope News ao amin'ny YouTube. Kitiho ny sary mba hijery ilay horonantsary.
Nandritra ny valan-dresaka ho an'ny mpanao gazety natao tamin'ny Novambra 2017 niaraka tamin'ny Filoha Frantsay Emmanuel Macron, nanambara ny filoham-pirenena Ghaneana Nana Akuffo-Addo fa tsy maintsy miala amin'ny “toe-tsaina tia miankinan-doha” amin'ny fanampiana Tandrefana ny Afrikana ary hitady fahafahana ara-barotra mitovy.
Raha maro no nidera ny fanambarany mafonja, ny sasany kosa nihevitra fa nanala tsy ara-drariny ny firenena Eoropeana tahaka an'i Frantsa tsy ho tompon'andraikitra amin'ny fanararaotan'izy ireo ny firenena Afrikana taloha sy ankehitriny izany. Ny sasany kosa tsy mino fa hanatanteraka ny fampanantenany ny mpanao politika tahaka an'i Akuffo-Addo.
Nitsidika an'i Ghana, izay zanatany Britanika teo aloha ny filoha Macron, ho marika fa manana “fifandraisana kaontinantaly amin'i Afrika” izy, fa tsy mifantoka amin'ny firenena miteny Frantsay raha oharina amin'ny firenena miteny Anglisy, araka ny voalazan'ireo mpanolo-tsainy. Sambany teo amin'ny tantaran'i Ghana no nisy filoha Frantsay nitsidika ny firenena:
Mirehareha aho fa filoha frantsay voalohany nitsidika an'i Ghana. Ho ela velona ny fisakaizana eo amin'i Frantsa sy Ghana
Nandritra ny valan-dresaka ho an'ny mpanao gazety, nivoaka ny valintenin'ny filohan'i Ghana momba ny fiankinan-dohan'i Afrika amin'ny fanampiana, rehefa nanontany ny Filoha Macron ny mpanao gazety iray avy ao amin'ny JoyNews:
Fantatray fa mifantoka amin'ny faritra miteny Frantsay ny fanohanan'i Frantsa an'i Afrika, nandritra ny taona maro. Anatin'ity fiaraha-miasa vaovao ity, moa ve ianareo mijery ny toerana hiheverana an'i Afrika ho toy ny kaontinanta iray tsy hijerena izay fiavian'ny mpanjanaka azy ireo?
Nitazona ny fampanantenana handrodana ny fiverimberenan'ny fiankinan-doha amin'ny fanampiana avy any ivelany i Akuffo-Addo, izay nandresy tamin'ny fifidianana manan-tantara sy nilamina tamin'ny taona 2017, taorian'ny firotsahana indroa tsy nahomby teo aloha. Nandritra ny fitsidihan'i Macron, nanipika ny filohan'i Ghana fa “tianay ny fifandraisanay amin'i Frantsa mba hiavaka amin'ny fitomboan'ny fiarahamiasa ara-barotra sy fampiasambola, fa tsy fanampiana.” Araka ny antontan'isa, nitotaly 1.5 miliara euros ny fampiasam-bola Frantsay tao Ghana tamin'ny taona 2015, ka nahatonga an'i Ghana ho toerana faha-fito goavana indrindra amin'ny fampiasam-bola Frantsay any Afrika atsimon'i Sahara. Ary tamin'ny taona 2014, 67,56 tapitrisa dolara Amerikana ny fanampiana ho an'ny fampandrosoana ofisialy avy amin'i Frantsa ho an'i Ghana, araka ny tatitry ny vavahadin-tahiry ao amin'ny firenena IndexMundi.
Tsy mahagaga raha niezaka mafy namaly ny fanontaniana napetraky ny mpanao gazety i Akuffo-Addo. Niparitaka tao amin'ny YouTube ny valintenin'ny filoha:
Mila miala amin'io toe-tsaina tia miankin-doha io isika. Ity toe-tsaina mikasika ny hoe ‘inona no azon'i Frantsa atao ho antsika?’ ity. Hanao izay tiany atao i Frantsa mba ho tombontsoany, ary rehefa mifanojo amin'ny antsika izany, ‘tant mieux’ [vao maika tsara] hoy ny filazan'ny Frantsay. Ny ahiahintsika dia tokony hoe inona no ilaintsika hatao amin'ity taonjato faha-21 ity mba hanesorana an'i Afrika tsy ho eo am-pelatanana sy hangataka fanampiana, ho an'ny fiantrana, ho an'ny fanomezana. Ny kaontinanta Afrikana, rehefa mijery ny loharanon-karenany ianao, dia tokony hanome vola ho an'ny toerana hafa … Tokony hanana toe-tsaina milaza isika hoe afaka manao izany isika … ary rehefa manana izany toe-tsaina izany isika dia hahita fa misy antony manafaka ny tenantsika.
Nosokajian'ny fampahalalam-baovao fa “ara-penitra mahazatra” ny valinteny manokan'i Macron.
Nisy nijery in-2,6 tapitrisa mahery tao amin'ny Facebook ny lahatsary nozarain'ny tranonkala ara-kolontsaina miteny Frantsay NOFI ary nisy nizara in-40.000 mahery.
Maro ireo nidera ny tenin'ny filoha ho mandray fepetra lehibe manohitra ireo mpanjanaka taloha, tahaka an'i John Muhammad izay nanoratra fanehoan-kevitra tao amin'ny Facebook:
Miarahaba ny rahalahiko aho, tsy maintsy ho lasa tsy miankina tanteraka amin'ny mpanjanaka izay te-hanapaka sy hamaritra ny hoavintsika isika, manana izay rehetra ilain'izy ireo isika, ireo harenantsika mineraly sy ny loharanon-karena manerana ny kaontinanta. Avy amintsika mpanjakavavy sy mpanjakalahy an'i AFRIKA ny harena
“Manala tsiny ny andraikitr'i Macron sy Frantsa fotsiny i Akufo-Addo”
Na izany aza, niteraka fijery isan-karazany ny fanambaran'ny filoha. Tamin'ny lahatsoratra iray tao amin'ny bilaogy Africa Is a Country, Dennis Laumann, profesora momba ny tantara Afrikanina ao amin'ny Oniversiten'i Memphis, nilaza hoe:
Tsy misy adihevitra fa tsy maintsy mamaritra ny anjarany manokana ny Afrikanina saingy manala tsiny fotsiny ny andraikitr'i Macron sy Frantsa sy ny Tandrefana ho an'i Afrika i Akufo-Addo. Mety ho adihevitra be kokoa sy manafintohina raha nanararaotra hifandona amin'i Macron momba ny trosan'i Frantsa amin'i Afrika tamin'ny fivarotana andevo sy ny fanjanahan-tany; ny tantarany amin'ny fanomezana fitaovam-piadiana sy fiarovana ireo mpanao didy jadona tahaka an'i Mobutu Sese Seko sy Blaise Compaoré; ary ny firaisana tsikombakomban'ireo orinasa Frantsay amin'ny kolikoly isan'andro i Akufo-Addo.
Mpanao gazety Ama Lorenz, manoratra ao amin'ny tranonkala politika Euractiv, nilaza fa mila mampifanaraka ny teniny amin'ny “asa mivaingana” ny filoha Akufo-Addo satria sarotra ny toe-draharaha, ary tsy voatery avy amin'ny loharano Eoropeana foana ny fiankianan-doha:
Niy tenin'ny filoha Ghaneana nitodika tany amin'i Macron dia mety ho raisina ho antso ho an'ny filoham-pirenena Afrikanina fa tsy ho an'ny mpanome fanampiana iraisam-pirenena.
Mila tsena Afrikanina matanjaka ao an-toerana ny fanavaozana takian'i Akufo-Addoaha raha te ho lasa tsy miankin-doha amin'ny fanampiana Eoropeana ny firenena. Saingy amin’ izany tranga izany, dia tsy misy famantarana tsara. Raha tokony hanana fifampiraharahana ara-barotra mitovy amin'ny mpifanolo-bodirindrina Afrikana, dia misy ny fiankinan-doha tsy dia tsara, indrindra fa amin'i Nizeria..
Mbola miankina amin'ny famatsiana etona avy any Nizeria i Ghana na dia manana tahiry be dia be aza ny tahirin-tsolikany voajanahary mbola tsy nahazo fanampiana. Efa tamin'ny faran'ny volana jona 2016 no najanon'ny mpamatsy etona Nizeriana ny famatsiana noho ny tsy fandoavam-bola ary tsy maintsy tohanan'ny fonosana vonjimaika an'ny FMI mitentina 917 tapitrisa dolara i Ghana.
‘Manafoana ny asa tsy mety sasatra an'ireo mpandraharaha, mpikatroka, sy mpanakanto manerana ny kaontinanta izany’
Nilaza ny Profesora mpanampy amin'ny fianarana Frantsay sy Frankôfôna ao amin'ny Oniversiten'i Michigan, Annette Joseph-Gabriel fa ny kabarin'ny filoha Ghaneana, toy ny olon-kafa talohany, dia “nanatsotra loatra ny antony mahatonga ny fahantrana any Afrika izay vokatry ny toe-tsaina, ny tsy fahombiazan'ny sain'ny Afrikana mandinika zava-drehera ankoatra ny fiankinan-doha amin'ny fanampiana avy any ivelany “. Ao amin'ny lahatsoratra navoaka tao amin'ny Black Perspective, nanoratra izy hoe:
Nanjary fanontaniana mikasika ny fanovana toe-tsaina ny tsy fahombiazana ara-toekarena ao Afrika: “Mila manana toe-tsaina milaza isika hoe: vitantsika io … ary rehefa manana izany toe-tsaina izany isika dia hahita fa misy antony manafaka ho an'ny tenantsika.” Ity fitantarana manatsoaka lesona ity, izay hiheverana ny fahantrana ara-toekarena ho toy ny tsy fahombiazana ara-pitondran-tena, dia manindrahindra ny idealin'ny “bootstraps” any Etazonia izay mbola ampiasaina ho fialan-tsiny ho an'ny Fanjakana Amerikanina mba hisorohana ny fanomezana tolotra sy fiarovana lehibe ho an'ny olom-pireneny..
Miteraka loza maro any Afrika ihany koa izany. Voalohany, tsy dia manome vahaolana vaovao izany satria tsy mijery ireo antony sarotra mahatonga ny olana ara-toekarena any Afrika. Manaisotra ny asa mafin'ireo mpandraharaha, mpikatroka, sy mpanakanto manerana ny kaontinanta ihany koa izany, izay manohy mandinika sy miasa amin'ny fanavotana maika sy ny fahaleovantena ara-ekonomika. Farany, manamafy ny fepetra tsy mitovy izay ifotoran'ny fifandraisana Frantsay-Ghaneana izany satria manaisotra an'i Frantsa, ary raha hitarina, Eoropa, amin'ny lova niaretana amin'ny politikan'ny raharaham-bahiny izay nanampy betsaka tamin'ny toe-javatra efa misy. Raha fintinina, tsy “manome lesona” an'i Macron i Akufo-Addo. […] Ny fitantaran'i Akufo-Addo dia anisan'ny manamora ny fanadinoin'i Frantsa ny lasa izay tsy tiany hahavoatazona azy ho tompon'andraikitra.
“Mora ny miteny. Tokony arahany asa ny teniny”
Tsy gaga ihany koa i Zialey ao Accra
Mora ny miteny
Tokony arahany asa ny teniny.
Izy rahateo no mpitarika ary ao anatin'ny toerana hampiseho antsika.
Niombon-kevitra i Sura Amabaya fa tia miresaka be loatra fa tsy miasa ireo mpitarika Afrikanina:
Manjary mpanao kabary goavana ireo mpitarika Afrikanina kanefa vitsy ny asa hita fa vita. Andeha hojerena raha handroso ho mahaleotena i Ghana, ka hidera ny teniny feno herim-po isika raha tanteraka izany.